Hurumende Yotadza Kuwirirana neVashandi Vayo paMihoro
Kukadzi 02, 2010
Vashandi vehurumende vanoti vangangopinda mukuramwa mabasa zvichitevera kutadza kuwirirana kwavaita nehurumende panyaya dzemihoro. Vamiri vevashandi ava vasangana neChipiri nevamiriri vehurumende vakazeya nyaya dzemihoro dziri kudiwa nemushandi wose wehurumende.
Masangano apinda mumusangano uyu anoti Zimbabwe Teachers Association, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Teachers Union of Zimbabwe, pamwe nePublic Service Association. Masangano aya anonzi atadza kuwirirana nehurumende, sezvo hurumende yati haina mari. Munyori mukuru wePTUZ, VaRaymond Majongwe, vaudza Studio7 kuti vashandi vehurumende vachasangana zvakare muHarare neChishanu kuti varonge remangwana ravo pagakava iri.
Vanoti vachasanganawo zvakare muBulawayo nemusi weMuvhuro, apo vachabuda nematanho avanofanirwa kutora.
Vashandi vanoti vari kuda kuti mari dzavo dzemihoro dzitangire pamazana matanhatu emadhora pamwedzi. Pari zvino mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi ari kuwana madhora zana nemakumi mashanu ane madhora mashanu.
Vashandi vanoti mari iyi ishoma zvikuru kuti vararame. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti mhuri ine vanhu vatanhatu inofanirwa kunge ichiwana mari inoita mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora pamwedzi kuitira kuti irarame zvakanaka.
Gurukota rinomirira vashandi vehurumende, Professor Eliphas Mukonoweshuro, vaudza Studio7 kuti havakwanisi kutaura nezvazvo, sezvo vanga vasati vaziviswa nezvabuda mumusangano uyu.
Hurukuro naVaRaymond Majongwe